8 Decks BJ Boss | ThatsLuck.com
8 Decks BJ Boss: Gịnị kpatara Egwuregwu Blackjack Online?
Blackjack ọ bụ ikekwe naanị egwuregwu cha cha ebe omume onye ọkpụkpọ nwere oke mkpebi na nsogbu ya nke mmeri, cYou maara egwuregwu ịgba chaa chaa ọzọ ebe enwere ike?
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị onye gamer nwere ahụmahụ, ekele maka sọftụwia ọhụrụ ahụ 8 Decks BJ onyeisi ị nwere ike belata ọnụ ụlọ site na 5% ruo 0.5%!
Ekele maka sọftụwia ọhụrụ a ị ga - achọpụta na itinye usoro ziri ezi dị mfe.
Tupu ịga n'ihu na-echeta nke ahụ ThatsLuck I nwekwara ike ichota free ọdịnaya, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na-emelite na akwụkwọ denye aha na ọwa na ►YouTube.
8 Decks BJ onyeisi: kedu ihe ọ bụ?
Randomgba egwu na-enweghị atụ na-atụ anya ịkụ 21 na aka ọ bụla abụghị ezigbo echiche, mana mgbe ụfọdụ n'oge nnọkọ ịntanetị ị ga-aghọta ozugbo onye na-egwu aghara aghara, naanị n'ihi na ha anaghị etinye usoro isi.
Ebe ọ bụ na enwere ohere maka mmụba, ebidola igwu egwu n'amaghị nhọrọ (dịka ọmụmaatụ ma ọ ga-akụ ma ọ bụ guzoro) nwere ike ịnweta mmeri, cheta na ọ bụrụ na igwu egwu na-enwetaghị ozi a, onye na-ere ahịa ga-enwe uru. 5%, yabụ ohere ị ga - emeri ga - ebelata.
Kpọmkwem n'echiche a 8 Decks BJ onyeisi ọ nwere ike ịbụ ezigbo ngwọta, n'echiche na ọ dabara usoro kachasị mma maka Blackjack variant na Ogwe 8 (nke kachasị dị na ntanetị) iji nweta njikwa ego nke onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ịhọrọ ịnwa ịnwe usoro ọjọọ nke egwuregwu ahụ, mana mgbe ebumnuche ya, cheta nke ọma, iru Kwụsịnụ nke aghaghi idozi ya tupu ịmalite oge egwuregwu ọ bụla.
Imeri online na 8 Decks BJ onyeisi
Sọftụwia ọhụrụ a iji merie Blackjack n'ịntanetị dị mfe iji, ka anyị tinye ya otu a: ọ bụrụ na inwetụbeghị usoro ịkụ nzọ tupu, iji 8 Decks BJ Boss naanị ị nwere ike imeziwanye egwuregwu gị na karịa oge niile nke oge mmeri gị.
Nke mbụ, ana m egosipụta nke ahụ site na ịlele ihe dị n’elu aka nri Nọrọ n’elu ị nwere ike nkasi obi na-usoro ihe omume karịrị na egwuregwu window, dị ka ị pụrụ ịhụ na ngosi video on ►YouTube.
Yabụ mgbe etinyere mmadụ Kwụsịnụ tupu ịmalite nnọkọ ahụ, n'oge usoro egwuregwu ahụ na-agbaso ntuziaka na tebụl, kachasị nke ọma iji belata uru ụlọ na ntanetị Blackjack dị iche site na 5% ruo 0,7%. Ogwe 8, ebe ị nwere ike ịmaghị, ịgụta kaadị na-abaghị uru n'ihi ntinye akpụkpọ ụkwụ nke naanị 50%.
Egwuregwu 4 na-aga n'ihu
Dịka ị pụrụ ịhụ n'aka nri nke usoro ihe omume ahụ, ịnwere ike ịhọrọ iji otu n'ime usoro njikwa ego 4 enyere, nke emebere iji gbochie usoro egwuregwu kachasị sie ike, nke ahụ bụ mgbe onye na-ere ahịa malitere ịmalite mmeri ọbụlagodi na onye ọkpụkpọ ahụ nwere 20, ma ọ bụ tie 21, ikpe dị ka ị ga-ahụ adịghị obere ma ọ dị nwute.
Ọganihu ndị enyere (ma e wezụga nke 2 Bread Win variants) na-enye maka mmụba enwere ike na osisi naanị mgbe onye ọkpụkpọ meriri aka, nke a bụ iji gbalịa iji ọnọdụ ndị dị mma mee ihe kama ịnagide nke adịghị mma.
Ọganihu ndị a tụrụ anya bụ:
Nri mmeri 3: ọ bụ kpochapụwo Onye mmeri Bread, a na-emegharị nke ọma site na ndị egwuregwu roulette, ebe ọ bụ n'eziokwu a na-etinye ya na usoro nke 5, (dị ka nke ọzọ na-esote). Na omume, ị na-agbanye otu otu otu, ọ bụrụ na idafu nkeji 1, ịgbanwee nzọ 3 ruo mgbe i megharịrị ihe niile furu efu wee merie 2, ọ bụrụ na enwekwara nkeji 1 ọzọ (6 x 2 = 3) ị gbanwere na ịkụ nzọ 6 nkeji ma nogide na onodu ogwe osisi ahu rue mgbe a ghaghachitere ya. N'adịghị ka ụdị 3-iche (Bread Win 5) dị iche iche, iji naanị ọkwa 5 na-enye ohere maka mgbake ngwa ngwa, ọ bụ ezie na osisi nwere ike itolite ngwa ngwa.
Achịcha merie 5: kpochapụwo Achịcha Winner, na ime ihe na-ama kọwara n'elu.
Vs D'Alembert: dị ka m dere tupu usoro ndị a gbalịa jiri uru dị mma, ya mere, anyị na-egwu egwu na-abụghị nke kpochapụwo D'Alembert, yabụ anyị na-abawanye nzọ site na 1 nkeji maka ọgbaghara ọ bụla meriri ma belata site na 1 nkeji maka agbapụ ọ bụla furu efu. N'ụzọ doro anya, oge ọ bụla inwetara 1 nkeji nke mmeri net ma ị weghachitela ngwa ngwa, a na-eweghachi ọnụ ọgụgụ ahụ.
Oscar Mike: N’ụzọ ụfọdụ ọ bụ ọkacha mmasị m, mana ọ na-abịa n’ihe masịrị mmadụ. Ihe mgbaru ọsọ doro anya merie 1 unit na bụla otu ọgụ. Ọ bụrụ na mgbe a nzọ aka na-merie site player mgbe agha ahụ kwubiri, ma ọ bụrụ na kama aka furu efu ị na-anọgide na-egwu site ịkụ nzọ 1 unit, ma ozugbo ị merie a aka ị na-amụba osisi site 1 unit, nke mgbe niile na-anọgide na otu. larịị ọbụlagodi n'aka efu ọ bụla. Ihu ọma ma ọ bụrụ na ị merie gị dịkwuo nzọ gị, ma ọ bụrụ na ị hapụ gị mgbe niile ịkụ nọmba nke nkeji nzọ na gara aga ogbugba. O doro anya na e mepụtara ọganihu a ka ọ ghara ịba ụba nzọ ahụ n'ụzọ dị njọ na ihe na-adọrọ mmasị bụ na n'ọnọdụ ọ bụla ọbụlagodi na ị ga-nzọ ihe atụ 5 nkeji, mana ọgụ mwakpo bụ -2, nzọ ahụ gosipụtara site 8 Decks BJ onyeisi ọ gaghị abụ nkeji 5, mana naanị 3, nke mere na n'ihe banyere mmeri, ọgụ ahụ mechiri + 1, na-enweghị ihe egwu iji nwekwuo nguzozi na-ezighi ezi ma ya mere mgbake ma ọ bụrụ na aka akụ meriri aka .
Ozugbo ịhọrọ nhọrọ nke kachasị mma maka ụdị egwuregwu gị, pịa na bọtịnụ ahụ Win o furu efu dabere na nsonaazụ aka, 8 Decks BJ onyeisi ga-egosi na ọnụọgụ nke nkeji na-eche maka na ngalaba dị n'okpuru (Ọzọ Bet U).
M na-echetara gị na ebe ọ bụ na enweghị uru mgbakọ na mwepụ karịa ụlọ, ọ dị mkpa ịtọ ya Nkwụsị kwa ụbọchị dịka ọmụmaatụ nke nkeji 10, na ọ bụrụ na igwu egwu na tebụl nke euro 5 (ma ọ bụ dollar), ọ pụtara ị nweta euro 50 kwa ụbọchị yana iche n'echiche ịghara imeri kwa ụbọchị, na njedebe nke ọnwa ikekwe anyị agaghị anọ na ya Caribbean, mana ọbụghị n'ime uwe ime anyị!
Nbudata Nbudata	8DBJBoss.zip - 2 MB
Categorie Blackjack Nkeji edemede